(Arsenic မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အတည်ငြိမ်ဆုံး အာဆင်းနစ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
စိန်ဖြူ (စိန်သတ္တုဟူ၍ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ-၄တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။)အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အာဆင်းနစ်(Arsenic) ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဓာတုဗေဒသင်္ကေတမှာ As ဖြစ်သည်။ အဝါ၊ အနက်၊ မီးခိုးဟူသော သုံးမျိုးစပ်အရောင်ဖြစ်ပြီး ငွေရောင်သမ်းနေသော ကြွပ်ဆတ်သည့် ပုံဆောင်ခဲအနေဖြင့် တွေ့ရသည်။ သံမဏိရောင် ခပ်မွဲမွဲရှိ၍ သတ္တုကဲ့သို့ပြောင် လက်သော အခဲဖြစ်၏။ ခနောက်စိမ်းနှင့် ကြွပ်တို့ကဲ့သို့ပင် သတ္တုဟုလည်း မဆိုနိုင်၊ သတ္တုမဟုတ်ဟူ၍လည်း မဆိုနိုင်သော ကြားသတ္တုဒြဗ်စင်ဖြစ်၏။ သို့သော် သတ္တုမဟုတ်သော ဖော့စဖောရစ်နှင့် ပို၍နီးစပ်၏။ အာဆင်းနစ်ကို သယံဇာတအဖြစ်ဖြင့် ၎င်း၊ အထူးသဖြင့် ကန့်နှင့် ရောစပ်၍ တွေ့နေကျသတ္တုရိုင်းများ တွင်၎င်း တွေ့ရ၏။ အခြား ဒြပ်စင်များနှင့်လည်း အလွယ်တကူ ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ အပူပေးသောအခါ အလွယ်တကူ ကြက်သွန်နံ့ရသော အာဆင်းနစ် ထွိုင်အောက်ဆိုဒ်(arsenic trioxide) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ non metallic form ဓာတ်ပြုအား အလွန် နည်းသော်လည်း ပြင်းအားကောင်းသည့် အက်ဆစ်များ ထဲတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
အခြားဓာတ်ပေါင်းများနှင့် ရောစပ်ထားသော အာဆင်းနစ်သည် အာစနစ်ချည်းသက်သက်ထက်ပို၍ အသုံးဝင်သည်။ အာဆင်းနစ် ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖန်ထည်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လေဆာရောင်ခြည် ထုတ်လွှတ်နိုင်သော semiconductor gallium arsenade ပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုပါသည်။ Arsine gas AsH3 သည် လွန်စွာ အဆိပ်ပြင်းသောကြောင့် အထူးဂရုပြု သုံးရသော်လည်း ၎င်းကို အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းပြုလုပ်သော စက်ရုံများတွင် အဓိက အရေးကြီးဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အာဆင်းနစ်ဒြဗ်ပေါင်းများ သည် အမျိုးမျိုးသော အသီးပင် အရွက်ပင်များကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ပိုးမွှားများကို သတ်ရန် ပိုးသတ်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အလွန်အသုံးဝင်၏။ ကော့ပါး(ကြေးနီ)၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အောက်စီဂျင်တို့နှင့် ရောစပ် ထားသော အာစနစ်ဒြဗ်ပေါင်းများကို ခြယ်ဆေးပေါင်း မြောက်များစွာတို့တွင် အသုံးပြုရ၏။ အနုပညာတွင် အသုံးများသော မြစိမ်းရောင်အသွေး ရှိသည့် 'ပဲရစ် ဂရင်း(copper acetoarsenite)'ခေါ် ထင်ရှားသော ခြယ်ဆေးတစ်မျိုးတွင် အာစနစ်ပါ၏။ အာဆင်းနစ် ဒြဗ်ပေါင်းများမှ အဆိပ်ငွေ့များ ထွက်မည်ဟု ယူဆကြသဖြင့် နံရံကပ်စက္ကူများနှင့်အထည် များကို အာဆင်းနစ်ပါသော ဆိုးဆေးများဖြင့် အရောင်ခြယ်လေ့ ဆိုးလေ့မရှိကြချေ။
အာဆင်းနစ်သည် သဘာဝတွင် အနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် မြေဆီလွှာထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး လေနှင့် ရေတို့မှတစ်ဆင့် နေရာအနှံ့အပြားသို့ပျံ့နှံ့ သွားသည်။ အာဆင်းနစ်သည် သေစေနိုင်သော အဆိပ်ရှိသော်လည်း တချို့သက်ရှိများအတွက် အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။ သန့်စင်သော အာဆင်းနစ် ကို သဘာဝတွင် microcrystalline အဖြစ်နှင့်သာ အနည်းအပါး တွေ့ရသည်။ ၎င်းကို ဆိုက်ဘေးရီးယား၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ရိုမေးနီးယားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့တွင်တွေ့ရသည်။ အာဆင်းနစ်ကို အများအားဖြင့် ဆာလ်ဖာနှင့် ရောစပ်ပြီး arsenopyrite (AsFeS) တွင်တွေ့ရသည်။ 
↑ Cverna, Fran (2002)။ ASM Ready Reference: Thermal properties of metals။ ASM International။ pp. 8–။ ISBN 978-0-87170-768-0။ pdf.
↑ Lide, David R., ed. (2000)။ "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds"။ Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (81 ed.)။ CRC press။ ISBN 0849304814။
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် စိန်ဖြူ ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိန်ဖြူ&oldid=722748" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။